फ्रान्स मा सबै भन्दा राम्रो बैंकहरु संग आफ्नो पैसा लगानी गर्नुहोस् - ALinks
फ्रान्सेली बैंकि system प्रणाली संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र विकसित बैंकि systems प्रणाली हो। फ्रान्स विश्व मा लगभग सबै लोकप्रिय बैंक को शाखा होस्ट गर्दछ। देशमा कुल total550० भन्दा बढी बैंकहरू छन्। यी मध्ये 300 वित्तीय संस्था प्रदान गर्ने क्रेडिट संस्था हो सहायताको। यी क्रेडिट संस्थाहरूमा आपसी बैंकहरू र नगरपालिका क्रेडिट बैंकहरू समावेश छन्। फ्रान्स दुबै सार्वजनिक स्वामित्वमा छ, कम्तिमा आंशिक रूपमा, फ्रान्सेली ट्रेजरी बैंकहरू र निजी बैंकहरू द्वारा। फ्रान्सेली बैंकिङ क्षेत्रले लगभग 360,000 व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ। बैंक अफ फ्रान्स फ्रान्सको केन्द्रीय बैंक हो (फ्रान्सेलीमा: Banque de France)। बैंक अफ फ्रान्स अर्थतन्त्रको स्तम्भ हो र यसले देशका अधिकांश आर्थिक र वित्तीय सेवाहरूलाई नियमन गर्छ.
फ्रान्सको बैंकिंग प्रणाली हो व्यापक रूपमा चार प्रमुख कोटीहरूमा विभाजित:
यी सबै कोटीहरूका बैंकहरूले विभिन्न प्रकारका सेवाहरू प्रदान गर्दछ, जुन अतिव्यापन हुन्छन्। फ्रान्स एक यूरोपीय संघ देश हो, यस देशमा प्रयोग भएको मुद्रा यूरो हो। यूरो पनि विश्वमा 8th वां सबैभन्दा शक्तिशाली मुद्राको रूपमा क्रमबद्ध छ।
के विदेशीले फ्रान्समा बैंक खाता खोल्न सक्छ?
फ्रान्समा बैंक खाता खोल्न योग्यता। तपाईलाई फ्रान्समा बैंक खाता खोल्न अनुमति दिनुपर्छ चाहे तपाई निवासी होस् वा गैर-निवासी। युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (EEA) का बासिन्दा र गैर-निवासीहरूसँग बैंक खातामा स्वचालित हकदारता छ, जबकि युरोप बाहिर बस्नेहरूसँग छैन।
यो गाइड फ्रान्सेली बैंकि system प्रणालीमा यी बिभिन्न कोटीहरूको द्रुत विवरण प्रदान गर्दछ।
बैंक अफ फ्रान्स वा बान्की डे फ्रान्स १ 1800०० मा एक निजी संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको थियो, र पछि यसलाई फ्रान्सेली राज्यले अधिग्रहण गर्यो। यो फ्रान्सेली र यूरोपियन कानून द्वारा शासित एक स्वतन्त्र संस्था हो। यसको मुख्यालय पेरिसमा रहेको छ। बैंक अफ फ्रान्स फ्रान्सको केन्द्रीय बैंकको रूपमा पनि काम गर्दछ। बैंकलाई युरोसिस्टमको फ्रान्सेली स्तम्भ पनि भनिन्छ। यूरोसिस्टम संघीय मौद्रिक प्राधिकरण हो जुन यूरोपियन केन्द्रीय बैंक द्वारा गठन र संचालित हुन्छ। युरोजोनका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि यूरोसिस्टम चलाउँछन् तर बैंक अफ फ्रान्स पक्कै पनि एक प्रमुख सदस्य हो।
बैंक अफ फ्रान्सको मुख्य मिशन अन्य यूरो देशहरू जस्तै छ। यो को लागि उत्तरदायी छ निम्न तीन अभियानहरू:
मुलुकमा मौद्रिक रणनीति गठन गर्दै।
देशको वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने, उदाहरणका लागि मुद्रास्फीति र बेरोजगारी अनुगमन।
देशलाई आर्थिक सेवाहरु प्रदान गर्दै।
देशको केन्द्रीय बैंक भएकोले, बैंक अफ फ्रान्स पनि मुद्राको अभिभावकको रूपमा काम गर्दछ। बाँन्क डे फ्रान्स युरोपेली क्षेत्रमा युरो बैंकको नोटहरूको सबैभन्दा ठूलो मुद्रक हो। फ्रान्सको अउर्ग्ने क्षेत्रमा दुई मुद्रा नोट निर्माण साइटहरू छन्। यो मुद्राको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र कायम गर्न पनि जिम्मेदार छ।
लगानी बैंकहरू वित्तीय सेवा कम्पनीहरू हुन् जसले पैसा लगानी गर्छन्। यी बैंकहरूले लगानीकर्ता र धितोपत्र जारीकर्ताहरू बीच मध्यस्थको रूपमा काम गर्छन्। यी लगानीकर्ताहरू व्यक्ति, व्यवसाय, निगमहरू र सरकारहरू पनि हुन सक्छन्। यहाँ फ्रान्सका केही उत्कृष्ट लगानी बैंकहरू छन्:
बैंक अफ अमेरिका मेरिल लिन्च.
मोर्गन स्टेनले फ्रान्स.
निक्षेप बैंकहरू ती बैंकिङ संस्थाहरू हुन् जहाँ खाताधारकहरूले आफ्नो पैसा जम्मा गर्न सक्छन्। बैंक खाता भएका नागरिकहरूले आफ्नो पैसामा केही ब्याज कमाउनको लागि यी बैंकहरूमा आफ्नो पैसा जम्मा गर्न सक्छन्। उनीहरूले बचत खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्। विभिन्न उद्देश्यका लागि धेरै प्रकारका बचत खाताहरू उपलब्ध छन्। यहाँ उपलब्ध विभिन्न बचत खाताहरूको सूची छ:
पासबुक बचत खाता (फ्रेन्चमा: "Livret A", "Livret Jeune")। एक पासबुक बचत खाता एक सामान्य बचत खाता हो। यसले तपाईंलाई बैंक खातामा जम्मा गरेको पैसामा प्रतिस्पर्धी ब्याज कमाउन अनुमति दिन्छ। यो एक भौतिक नोटबुकको साथ पनि आउँदछ जुन पासबुकको रूपमा चिनिन्छ। यस पासबुकले खाता धारकलाई उसको खाताको लेनदेनहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ.
औद्योगिक विकासको लागि खाताहरू (फ्रान्सेलीमा: "Codevi")। यी मूल रूपमा हालको खाताहरू हुन्। तिनीहरू कम्पनीहरू वा फर्महरूमा कारोबारमा प्रयोग हुन्छन्.
आवास बचत योजनाहरू (फ्रेन्चमा: "ELP") र गृह बचत खाताहरू (फ्रेन्चमा: "CEL")। घर बचत खाता पहिलो पटक घर खरिदकर्ताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त खाता हो। यस खातामा डाउन पेमेन्टको लागि रकम बचत गर्ने सुविधा छ.
सेवानिवृत्ति बचत योजनाहरू (फ्रेन्चमा: "PERP" वा "Perco")। यो रोजगारी भएका व्यक्तिहरूको लागि दीर्घकालीन बचत योजना हो। यसलाई आत्म-व्यक्तिगतको लागि साझा सेवानिवृत्ति बचत योजनाको रूपमा पनि चिनिन्छ। साना व्यवसाय मालिकहरूले पनि यसलाई आफ्नो बचतको रूपमा प्रयोग गर्छन्।
यी केहि लोकप्रिय बैंकहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ केही ब्याज उत्पादन गर्न:
क्रेडिट संस्था व्यक्ति वा फर्महरूलाई पैसा दिन्छ। यी क्रेडिट संस्थाहरूले मानिसहरूलाई aण सुविधाको रूपमा leण दिन्छन्। यी बैंकहरूले पनि मूल रकममा ब्याजको रूपमा केहि रकम चार्ज गर्दछन्। उदाहरण को लागी, तिनीहरूले loansण वा धितो आपूर्ति गर्न सक्दछन्। यी क्रेडिट संस्थाले पनि दलाली गर्न सक्छन्। तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा marketsण बजार मा अधिक ध्यान दिने थियो। फ्रान्स मा केहि उत्तम संस्थाहरु हुन्:
AGCO वित्त एसएनसी
एजेंसी फ्रान्स लोकेल
एजेन्सी française de déلافpement
फ्रान्स मा एक बैंक खाता खोल्दै
बैंक खाता खोल्न धेरै सजिलो छ यदि यो स्पष्ट छ कि तपाइँ कुन कागजातहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ र यदि तपाइँले रोजेको बैंकमा कुशल ग्राहक सेवा छ भने। धेरै बैंकहरूसँग पर्याप्त भरपर्दो अनलाइन बैंकिङ प्रणालीहरू छन्। तपाइँ केहि बैंकहरूमा पनि अनलाइन बैंक खाता खोल्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। फ्रान्समा केही बैंकहरू छन् जुन कुनै भौतिक शाखाहरू नभएको अनलाइन मात्र सञ्चालन गर्छन्। खाता खोल्ने प्रक्रिया धेरै सरल छ, तपाईंले केही कागजातहरू बुझाउनु पर्छ। विदेशी नागरिकहरूको पनि फ्रान्समा बैंक खाता हुन सक्छ तर उनीहरूलाई केही थप कागजातहरू पनि आवश्यक पर्दछ।
बैंकहरूले आवश्यक कागजातहरू बैंक देखि बैंकमा अलिक फरक हुन सक्छ। यसैले विभिन्न अफरहरू जाँच गर्न र खाताहरू खोल्नको लागि नियम र सर्तहरू पढ्न सल्लाह दिइन्छ।
सामान्यतया, तपाईंले आफ्नो र आफ्नो आय पहिचान गर्न आवश्यक छ। थप विवरणमा यी कागजातहरू हुन् जुन तपाईंलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ, तपाईंले खोल्न चाहनुभएको खाताको प्रकारको आधारमा प्रदान गर्न:
एक फोटोग्राफको साथ मान्य परिचयपत्र।
भिसा वा निवास अनुमति फ्रान्स मा तपाइँको अधिकार को प्रमाण को रूप मा।
ठेगाना प्रमाणको भर्खरको प्रतिलिपि, तपाईंको नाम सहित हालको उपयोगिता बिलहरू स्वीकार्य छन्। तपाईंको ठेगाना प्रमाणित गर्ने अन्य तरिकाहरू बैंकको आधारमा स्वीकार्य हुन सक्छन्।
वित्तीय अवस्थाहरू जस्तै बैंक विवरणहरू, तलब, वा तपाईंको कमाइको प्रमाणको रूपमा payslips।
तपाईंको घर देशबाट कर पहिचान नम्बर। यो कर पहिचान नम्बर केहि देशहरूमा फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि बेलायतमा जस्तो, यो तपाईंको राष्ट्रिय बीमा नम्बर वा तपाईंको अद्वितीय करदाता नम्बर हुनेछ।
बैंकिंगफ्रान्समा बैंकिङफ्रान्सफ्रान्सेली बैंकिङ प्रणाली
कसरी दक्षिण सुडान मा एक बैंक खाता खोल्ने?
फ्रान्स मा कसरी काम पाउने
फ्रान्स मा भ्रमण गर्न को लागी उत्तम स्थानहरु